Zimbi kangakanani iisayithi ezigqithile kwinani labakhenkethi? | Martech Zone
NgoLwesine, uJuni 7, 2007 NgoMgqibelo, uJanuwari 6, 2018 Douglas Karr
IComScore isandula ukukhupha iifayile zayo IPhepha eliMhlophe ekuCinyweni kweKuki. Iicookies ziifayile ezincinci ezingena kumaphepha ewebhu ukugcina ulwazi kuthengiso, uhlalutyo, kubahlalutyi, kunye nokunceda ngamava omsebenzisi. Umzekelo, xa ujonga ibhokisi ukugcina ulwazi lwakho lokungena kwisiza, sigcinwa kwiKuki kwaye sifikelela kwixesha elizayo xa uvula iphepha.
Yintoni undwendwe olukhethekileyo?
Ngeenjongo zohlalutyo, ngalo lonke ixesha iphepha lewebhu liseta ikuki, liphawulwa njengondwendwe olutsha. Xa ubuya, bayabona ukuba sele ukhona. Kukho iziphene ezahlukeneyo ngale ndlela:
Abasebenzisi bayazicima iiKuki… ngaphezulu kakhulu kunokuba ucinga.
Umsebenzisi ofanayo ungena kwiwebhu kwiikhompyuter ezininzi okanye kwizikhangeli.
Iindawo zeendaba zengingqi ziyakwazi ukuhlawulisa abathengisi ngokusekwe kulwazi olunje. Ngapha koko, iphephandaba laseIndiya laseIndiya lithi,
IndyStar.com sisiseko esise-Indiana esise-1 kwezixhobo ezikwi-intanethi zeendaba kunye nolwazi, ezifumana ngaphezulu kwe-30 yezigidi zokujonga iphepha, 2.4 yezigidi zeendwendwe ezizodwa kunye nezigidi eziyi-4.7 ngenyanga.
Ke kungakanani ke ukucima i-cookie amanani e-skew?
Iziphumo zophononongo zityhila ukuba malunga neepesenti ezingama-31 zabasebenzisi bekhompyuter base-US bayazicoca ii-cookies zabo zenyanga yokuqala ngenyanga (okanye bazicoca ngesoftware ezenzekelayo), nge-avareji ye-4.7 iicookies ezahlukileyo eziqwalaselweyo kwisiza esinye kweli candelo lomsebenzisi. . Phambi kwezifundo ezizimeleyo ezenziwa yiBelden Associates ngo-2004, nguJupiterResearch ngo-2005 kunye no-Nielsen / NetRatings ngo-2005 nabo bagqiba kwelokuba ii-cookies ziyacinywa ngabangama-30% kubasebenzisi be-Intanethi ngenyanga.
Usebenzisa isampulu yasekhaya yase-comScore yaseMelika njengesiseko, umndilili we-cookies ezi-2.5 ezahlukileyo zaqwalaselwa kwikhompyuter nganye ye-Yahoo! Oku kufumanisa kubonisa ukuba, ngenxa yokucinywa kwecookie, inkqubo yokulinganisa ikhesenti esebenzisa ikuki ukulinganisa ubungakanani besiseko sabatyeleli besiza esiya kugqithisa kwinani lokwenyani labakhenkethi abakhethekileyo nge-2.5x, oko kukuthi ukugqithisa ukuya kuthi ga kwiipesenti ezili-150. Kwangokunjalo, uphononongo lufumanise ukuba inkqubo yeseva yentengiso esebenzisa ikuki ukulandelela ukufikelela kunye nokuphindaphindeka kwephulo lentengiso kwi-Intanethi kuya kugqithisela ukufikelela kwinqanaba ukuya kuthi ga kwi-2.6x kunye nokunyanzeliswa kwamaxesha ukuya kwinqanaba elifanayo. Obona bukhulu bokubaxwa kwezinto kuxhomekeke kubungakanani botyelelo kwisiza okanye ukuvezwa kwephulo.
Ngaba abathengisi bayasetyenziswa?
Ingayiyo! Thatha indawo enje ngendawo yeendaba zasekhaya kwaye inani elizi-2.4 lezigidi lingena kwangoko phantsi kweendwendwe ezisisigidi. Indawo yeendaba yindawo ekuthi ngokufuthi ityelelwe ngokunjalo, ukuze elo nani libe phantsi kakuhle kunelo. Ngoku yongeza inani labafundi abatyelela indawo ekhaya nasemsebenzini kwaye ulahla elo nani elinye inani elibalulekileyo.
Le yingxaki kwisihlwele esidala 'seebhola'. Ngelixa abantu abathengisayo bahlala bethengisa ngamanani, iiwebhusayithi zabo zinokuba neendwendwe ezimbalwa kakhulu kunamajelo eendaba okhuphisanayo. Ewe kunjalo, akukho ndlela yokwenyani 'yokulungisa' umba. Nangona nabuphi na ubuchwephesha bewebhu obunesiqingatha sobuchopho buqonda ukuba kunjalo, andizami ukutsho ukuba iisayithi zinenjongo yokugqithisa amanani abo. Abazibaxi izibalo zabo ngenjongo… banika ingxelo kumanani manqanaba asemgangathweni. Izibalo ezenzeka ukuba zingathembeki kakhulu.
Njengayo nayiphi na inkqubo elungileyo yentengiso, gxila kwiziphumo hayi kwinani leebola zamehlo! Ukuba u are Ukuthelekisa amaxabiso phakathi kweentlobo zeendaba, unokufuna ukusebenzisa izibalo ezikhawulezayo ukuze amanani abe yinto yokwenyani!
tags: amanani entengisointengisoizibhengezo zentengisoumdlaloUkucinywa kwecookieinani leendwendwe
Umbuzo we-MySQL wokuTsala iindidi kwiWordPress
Jun 8, 2007 ngo-1:48 AM
Mhlawumbi kwixesha elizayo into ethile ecaleni kweCardSpace iya kukhanyisa le ngxaki. Nangona, inokuba nguMzalwana omkhulu kakhulu. Kuza kufuneka silinde kwaye sibone.
Jun 8, 2007 ngo-8:32 AM
Utshilo, akukho ndlela ichanekileyo yokumisela iindwendwe ezizodwa kwiwebhusayithi.
iikuki azithembekanga kwaye ngoku abantu abaninzi basebenzisa ifleshi yokugcina icala lomxhasi.
Kodwa kubakhangisi, ukujonga iphepha kuko konke okubalulekileyo. Kulula ukumisela ngokuchanekileyo amanani amaxesha apho intengiso iboniswa 🙂
Kwaye ke, iinkonzo ezininzi zeenkcukacha-manani zewebhu zineengxaki zazo. Indawo yezibalo ephilayo njenge-statcounter iya kuthathela ingqalelo inani eliqingqiweyo labasebenzisi ngexesha.
Uhlalutyo lukaGoogle lungcono kakhulu koku, kodwa ngamanye amaxesha kufuneka ndilinde iintsuku ezi-2 ukuze ndifumane ingxelo yamva nje 🙁
Juni 9, 2007 ngo-4: 00 PM
"Umndilili wee-cookies ezi-2.5 ezahlukeneyo ziye zabonwa kwikhompyuter nganye yeYahoo!"
Bangaphi abasebenzisi bakaYahoo abakhoyo kwikhompyuter nganye yekhaya? Ewe, mhlawumbi malunga ne-2 okanye 3. Ndiyazi ukuba ndihlala ndingena emfazini wam ukuze ndikwazi ukujonga i-akhawunti yam, nokuba i-Yahoo okanye i-Google, i-Schwab okanye nayiphi na enye indawo.
Kwindlu yethu, siyenzeka ukuba sibe neePC ezi-4 kunye neMac kwi-Intanethi phakathi kwabantu abadala aba-2, ngoko kwenzeka ukuba unekhompyuter enye okanye ezininzi.
Ukuba unesayithi ye-reg kunye ne-log yeseva yakho ilungile, yenza ingxelo yamagama kwiidilesi ze-IP nganye. (oku kubonisa ukuba bangaphi abantu ababelana ngeekhompyutha/ abaneeakhawunti eziphindiweyo). Emva koko wenze ingxelo ebonisa ukuba zingaphi ii-IPs igama ngalinye elivele kuzo. (oku kubonisa ukuba a) iiips ziphinda zisetyenziswe yiisps kwaye b) abasebenzisi bangena besuka kwiindawo ezininzi. )
Ke ewe, inani lika 2.5 limalunga nokuba lilungile. Ayinabuqhophololo, ayibaxi, ilungile. Akukho ndaba apha. Hambisa ngoku.
Juni 9, 2007 ngo-4: 25 PM
Inqaku elibhaliweyo alixubusha imiba yokungena / ukuphuma ngokumalunga neekuki, ithetha ngecookie Ukucinywa kunye nefuthe layo kwimbonakalo yamaphepha eyodwa. Yahoo! ayicimi iikuki xa uphuma kwaye ungena.
Ingxaki kukuba ngaphezulu kwe-30% yamakhaya ACIMA amaqebengwana awo, ngoko ke ubonwa njengondwendwe olutsha… hayi omnye okhoyo ekhayeni. Nceda ufunde inqaku ukuze ufumane ingcaciso enzulu.
Umzekelo wakho kwakhona into endiyikhankanyayo kwisithuba sam, ukuba abantu abaninzi batyelela indawo efanayo ukusuka koomatshini abaninzi. Ngee-PC ze-4 kunye ne-Mac phakathi kwabantu abadala be-2, ukuba u tyelela indawo efanayo kubo bonke oomatshini, unokubonwa ngokufikelela kwi-5 'iindwendwe ezikhethekileyo', kungekhona i-2.5! Kwaye ukuba ucima rhoqo iikuki njengoko kwenza i-30%+ yabemi, oko kuguqukela ngaphezulu kwe-12.5 yeendwendwe ezizodwa.
Njengoko benditshilo, andikholelwa ukuba bubuqhophololo… kodwa ibaxiwe. Indlu yakho iyakungqina oko.
Juni 9, 2007 ngo-11: 22 PM
Phinda ulifunde inqaku kunye nempendulo yakho kwakhona...ulungile. Bendingayiqondi kakuhle inqaku lakho. Enkosi ngokucacisa.
Oko kuthethiweyo, i-gautam ilungile-abaninzi nangakumbi abantu basebenzisa ii-cookies ezikhanyayo, nangona bengenaso esinye isizathu sokusebenzisa iflash. Imfihlo encinci emdaka: awukwazi (lula) ukucima iikuki ezibekwe kwisibane sakho.
(UGoogle akanikezeli iflash kakhulu. Cofa kabini uyayenza…)
Ukuba iisayithi zifuna ukuvela zicocekile kubakhangisi, zifuna ukucaca ngakumbi malunga nokuba mangaphi amaxesha apho into ibijongwe ngubani, nini.
Kuba iifayile zokungena zingalunganga kuloo nto, ziya kufuna idatha eninzi kwisiseko sedatha. I-database enkulu kakhulu.
Kuba oko akuyi kwenzeka kungekudala, eyona mbono ilungileyo, njengoko utshoyo, kukugxila kwiziphumo!